UDOUGLAS DARE: UKUPHONONONGWA KWEALBHAMU YE-MILKTEETH - IINDABA
Kwicwecwe lakhe lesithathu nelityebileyo, imvumi-umbhali wengoma uxoxa iimfihlakalo zobuntwana, usapho kunye nenkumbulo.
Dlala iTrek Uvuyo emehlweni kaSara -UDouglas DareUkuhamba Ibhendi / Thenga
Umbhali-mculo ongumNgesi umbhali-ngoma uDouglas Dare urekhode icwecwe lakhe elitsha Ubisi eMargate, an kwidolophu yolwandle malunga neekhilomitha ezingama-200 ukusuka kwidolophu yakhe yaseDorset, apho wakhulela khona kwifama yobisi. Dare okwangoku kusekwe eLondon, kodwa Ubisi Alunabungqina bomi besixeko. Endaweni yoko, izaliswe yimifanekiso yobufundisi ukusuka ebuntwaneni. Ngemveliso efihlakeleyo evela kuTunng kaMike Lindsay, Ubisi ime ngaphandle kwerekhodi zangaphambili zeDare, eziqhelekileyo. Apha, ugqiba iimfihlakalo zememori, usapho kunye neziporho zedolophu yakowabo. UDare akafumani mpendulo ikhonkrithi kuyo nayiphi na kuzo, kodwa uhlela iintsalela zibe ziingoma ezintle eziboleka kwi-folksong yesiNgesi, pop ye-baroque, kunye ne-piano balladry.
Ubisi yingoma yesithathu yealbham ye-studio, elandelayo ka-2014 Whelm kunye no-2016 Aforger , Zombini ezazithintelwe kukhuseleko lwazo, imveliso ye-electro-classical kunye nokubhala ngengoma. Iitalente ze-Dare njengemvumi kunye nomqambi azange zabuzwa, kodwa kwabonakala ngathi kukho udonga olungabonakaliyo olumbambayo. Vula Ubisi , UDare ukwazile ukwahlukana nalo mkhwa. Wenza amava asemhlabeni avakele kwelinye ilizwe, ngenxa yenxalenye yokukhanya kukaLindsay kunye no-Dare's autoharp, isixhobo sakhe esitsha sokhetho.
Kumkhondo wokuma uvuyo ku-Sarah's Eyes, i-Dare strums ithe i-autoharp ngelixa yayithetha nefantom yentombazana encinci. USarah, wawuneminyaka emihlanu ubudala / Xa isilingi yawa ezindongeni zayo wayecula, ngokungathi uyamkhokela kwiiholo zekhaya labo lobuntwana. Ilizwi lakhe liyaqhekeka ngaphaya kwethamborini kunye nokubethwa ngamehlo njengoko ebuza, Uyabukhumbula ubude bakho eludongeni? / Uya kuba mde ngoku ngokuya kuwa. Akucaci ukuba ngaba uDare ubalisa inyani okanye intsomi, kodwa imvakalelo yakhe yokulahleka inzima njengoko sicinga ngesakhiwo esiqhekekileyo esiphawulwe ngobude bomntwana ongazange aphile.
Ubungqina buthatha indima yebard Ubisi , Ukubhiyozela imimangaliso yobuntwana ebaleni lokudlala. Ufanisa ulutsha nomhlaba okhanyayo, ilizwi lakhe likhwele isetyhula lepiyano riff ngathi ngumntwana kwi-carousel ngaphezulu kwe-synthesizer arpeggios kunye neempondo zophondo. I-Red Arrows iphonononga umbandela ofanayo kwisindululo. Dare ucula kumjikelo wokubaleka nonina eDenhay Hill, induli enengca eDorset. Ingoma ikhumbula umculo wesiNtu wesiNgesi, uhlaziywa ngeentlungu ezimnandi zedrone.
Ubisi isenokuba lelona cwecwe likhulu elibuyisiweyo likaDare, kodwa ikwangoyena usisityebi, iteyiphu evulekileyo yenkumbulo zombini ezibuhlungu nezithandwayo. Kwimidlalo eSilly, uDare ukhumbula isizungu sokukhuliswa kwakhe ezilalini. Umama usekhitshini uhlamba iipleyiti, uyacula. Mzalwana, umzala akazukudlala nam / Malume, umakazi awukhululekanga. Induduzo yolwazi, nangona kunjalo, ilele kumfanekiso ongabizwanga ngegama onomdla wokujoyina. I-albhamu igcwele ngokuhanjiswa kwe-nebulous ngolu hlobo, apho sishiyeke ukuba sichaze iintsomi zobuqu zikaDare. Iyenza Ubisi ndiziva ndimisiwe ngexesha, liphupha elingaphezulu kokukhumbula.
(I-Pitchfork inokufumana ikhomishini ngokuthenga okwenziwe ngokudibanisa indawo yethu.)
Ukuphononongwa kwentliziyo yemadonna
Imizuzwana engama-30 ukuya kumars vma 2017
UArthurhur Russell ubiza umxholo
iiprojektha ezimdaka ziyayipholisa intliziyo yakho
maya rudolph beyonce snl
esizwe - siphazanyiswe ngabantu abangabaziyo